Warar Goos Goos ah oo Somaliya ku Saabsan
1) Somaliya oo ka qaybgaleysa Shirka Wasiirada Dibedda ee Dalalka Islaamka .....
Kuala Lampur,1st April 2002 - Shirka maanta uga furmay caasimada Malaysia ee Kuala Laumpur Wasiirada Arrimaha Dibedda ee in ka badan konton Dawladood oo muslin ah oo looga hadlayay qeexidda iyo la-dagaalanka argagxisada, ayaa waxaa Dawladda KMG ah ee Soomaaliya uga qaybgalay wefdi uu hogaaminayo Wasiiru Dawlaha Arrimaha Dibedda Abuukar Sheikh Yuusuf .
Waxaana shirka oo uu furay Ra'iisul Wasaaraha Malaysia Mahatir Mohamed uu eedeyn kulul u soo jeediyay Xukuumadda Israel hawlgalka iyo weerarada gardarada ah ee ay ka wadaan dhulka daanta Galbeed .
Waxayna uga baaqeen Golaha Ammaanka inay ka qaadaan arrinkan tallaabooyin looga gol leeyahay sidii loo joojin lahaa weeraradan , iyagoo islamarkaana u muujiyay taageerada ay u hayaan maamulka iyo shacabka reer falastiin u leeyihiin xaqooda .
2) MAAMUL GOBOLEED LAGA DHISAY BAYDHABO !
Baydhaba,1st April 2002, Waxaa magaalada Baydhaba looga dhawaaqay maanta in laga dhisay maamul goboleed loogu magac daray Dawlad Goboleedka Koonfur Galbeed Soomaalia, oo uu madax ka yahay Col. Xasan Maxamed Nur (Shatiguduud ) muddo afar sano ah.
Waxaa Maamulkan hoos imaanaya gobolada labada Jubba, Shabeelaha Hoose, Baay iyo Bakool iyoGedo .
Wuxuuna Maamulka yeelanayaa Madaxweyne, Laba Madaxweyne Ku-Xigeen ,19 Wasiir, 19 Wasiir Ku-xigeen iyo Baarlamaan ka koobnaan doono 145 xubnood.. iyadoo ku dhawaaqidda Dawladdan ay ku soo beegmi doono shirka dhawaan laga filayo inuu ka dhaco Nairobi .
3) DAD SOOMAALIYEED OO KU DHINTAY DOONI KU DEGTAY BADDA YEMAN !
Sanca,1st April 2002, Dad soomaaliyeed oo gaaraya in ka badan 90 qofood ayaa ku geeriyooday todobaadkan badda Yeman , kadib markii ay degtay dooni ay la socdeen oo ka soo shiraacatay magaalada Boosaaso ee Waqooyi Bari Soomaaliya .
Waana masiibaddii ugu xumeyd ee soo marta dadka sida is-biimeynta ah u caadeystay inay ku soo safraan doonyaha yaryar ee xamuulka loogu tala galay .
Waxaa kaloo xusid mudan in dooni kale oo la socotay ta quustay , ay ka soo badbaaday masiibaddan .
4) XASAN ABSHIR OO IMAANAYA IMAARAADKA !
Mogadishu,1st April 2002- Warar lagu kalsoon yahay oo naga soo gaaray magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in Ra'iisul Wasaaraha Dawladda KMG ah Xasan Abshir Faarax lagu wado inuu yimaado dalka Isutagga Imaaraadka Carabta mustaqbalka dhow , waana booqashadii ugu horreysay ee uu Xasan Abshir ku yimaado Imaaraadka tan iyo markii loo magacaabay jagada Ra'iisul wasaaranimada muddo laga joogo dhawr bilood .
Waxaa xusid mudan inuu dhawr jeer booqasho ku yimid Imaaraadka intuu ahaa Wasiirka Macdanta iyo Petroolka ee Dawladii Cali Khaliif .
Waxay kaloo wararku sheegayaan inay suuragal tahay inuu Xasan Abshir sii booqdo Wadamada Malaysia iyo Indooniisiya , kuwaas oo uu hadda ka hor booqday isla Ra'iisul Wasaarihii ka horreeyay . .